Wɔde Yesu Kɔmaa Pontio Pilato | Yesu Asetena
SANHEDRIN NO SAN DII N’ASƐM ANƆPATUTUUTU
YUDA ISKARIOT KƆHYƐƐ NE HO AKƆMFO
WƆDE YESU KƆMAA PILATO SƐ ƆMMU NO FƆ
Bere a Petro kaa no ne mprɛnsa so sɛ ɔnnim Yesu no, na ɛyɛ dasuom. Saa anadwo no, Sanhedrin abadwafoɔ no gyinaa so dii Yesu asɛm torokaa sɔree so. Ade kyee Fida anɔpatutuutu na wɔsan bɛhyiaa mu. Nea enti a wɔsan bɛhyiae ne sɛ na wɔpɛ sɛ ɛyɛ te sɛ nea asɛm a wɔdii no anadwo no, mfomso biara nni ho. Wɔde Yesu bɛgyinaa wɔn anim.
Abadwafoɔ no san ka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Sɛ wone Kristo no a, ka kyerɛ yɛn.” Yesu buaa sɛ: “Sɛ meka kyerɛ mo mpo a, morennye nni da. Afei nso, sɛ mebisa mo asɛm a, moremmua koraa.” Afei Yesu de akokoduru kyerɛɛ wɔn sɛ nkɔmhyɛ a ɛwɔ Daniel 7:13 no fa ne ho. Ɔkaa sɛ: “Ɛfiri sɛsɛɛ rekorɔ no onipa Ba no bɛtena Onyankopɔn nsa nifa a tumi wom no so.”—Luka 22:67-69; Mateo 26:63.
Wɔsan bisaa no sɛ: “Enti, wone Onyankopɔn Ba no?” Yesu buaa sɛ: “Mo ara na moreka sɛ mene no.” Afei deɛ, na wɔte nka sɛ Yesu aka abususɛm, enti ɔfata owuo. Enti wɔbisaa wɔn ho sɛ: “Adanseɛ foforɔ bɛn bio na yɛhia?” (Luka 22:70, 71; Marko 14:64) Afei wɔguu Yesu mpokyerɛ de no kɔɔ Roma Amrado Pontio Pilato hɔ.
Wɔde Yesu rekɔ Pilato hɔ no, ɛbɛyɛ sɛ Yuda Iskariot hui, na ɔhuu sɛ Pilato hɔ a wɔde no rekɔ no deɛ, ɛkyerɛ sɛ wɔabu no kumfɔ. Enti ne tiboa buu no fɔ. Ná ɛsɛ sɛ ɔsrɛ Onyankopɔn hɔ bɔne fafiri de kyerɛ sɛ wanu ne ho, nanso wanyɛ saa. Mmom ɔsan de nnwetɛbona 30 no kɔmaa asɔfo mpanimfoɔ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Meyɛɛ bɔne sɛ meyii mogya a ɛtene maeɛ.” Nanso asɔfo no annya asɛm papa biara anka ankyerɛ no. Nea wɔkae ara ne sɛ: “Ɛfa yɛn ho bɛn? Ɛyɛ wo ara w’asɛm!”—Mateo 27:4.
Yuda too nnwetɛbona 30 no guu asɔrefie hɔ. Afei ɔsɛee n’asɛm koraa; bɔne a ɔyɛe nyinaa akyi no, ɔkɔɔ sɛ ɔrekɔkum ne ho aka ho. Yuda kɔhyɛɛ ne ho akɔmfo, na ɛbɛyɛ sɛ dua mman a ɔsɛn ne ho wɔ so no bui. Enti ɔfirii soro bɛhwee abotan so maa ne mu paee.—Asomafoɔ Nnwuma 1:17, 18.
Bere a wɔde Yesu kɔɔ Pontio Pilato hɔ no, na ewiem ntetee. Nanso Yudafo a wɔde no kɔe no anwura hɔ. Ná wɔte nka sɛ wɔne amanaman mufo bɔ a, wɔn ho bɛgu fĩ, na wɔrentumi nni Paanoo a Mmɔreka Nnim afahyɛ no. Saa afahyɛ no, na ɛfiri ase Nisan da a ɛtɔ so 15, na na wɔfa no sɛ ɛka Twam afahyɛ no ho.
Pilato pue bɛbisaa wɔn sɛ: “Soboɔ bɛn na mode bɔ onipa yi?” Wɔkaa sɛ: “Sɛ onipa yi nyɛ ɔbɔnefoɔ a, anka yɛamfa no ammrɛ wo.” Gyama Pilato tee nka sɛ wɔreteetee no, enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo ara momfa no nkɔbu no atɛn sɛdeɛ mo mmara teɛ.” Afei Yudafo no kaa biribi a ɛkyerɛ sɛ awudi na ɛwɔ wɔn komam. Wɔkaa sɛ: “Mmara mma kwan sɛ yɛkum obiara.”—Yohane 18:29-31.
Wɔnim sɛ, sɛ wɔkum Yesu Twam afahyɛ bere a, ɛbɛma nkurɔfo ayɛ basabasa. Nanso, sɛ wɔtumi bɔ Yesu sobo sɛ ɔtutu ɔman ase a, ɛno deɛ Romafo no wɔ hokwan sɛ wɔdi n’asɛm kum no. Ɛba saa a, obiara remfa ɛho asodi nto Yudafo no so.
Nyamesom mpanimfoɔ no anka ankyerɛ Pilato sɛ wɔabu Yesu fɔ dada sɛ waka abususɛm. Wɔde sobo foforo bɔɔ no sɛ: “Yɛakye ɔbarima yi sɛ  ɔtutu yɛn man ase na  ɔbara sɛ wɔnntua toɔ mmma Kaesare na  ɔka sɛ ɔno ne ɔhene Kristo.”—Luka 23:2.
Ná Pilato yɛ adwuma ma Roma aban, enti bere a wɔbɔɔ Yesu sobo sɛ waka sɛ ɔyɛ ɔhene no, ɛpem no. Ɛnna ɔsan kɔɔ amrado aban no mu frɛɛ Yesu bisaa no sɛ: “Wone Yudafoɔ hene no anaa?” Ɛkwan bi so no, na Pilato rebisa sɛ, ‘Wasi wo ho hene asɔre atia Ɔhempɔn Kaesare de abu mmara so anaa?’ Afei ɛbɛyɛ sɛ na Yesu pɛ sɛ ɔhu ne ho nsɛm a Pilato ate, enti ɔkaa sɛ: “Wo ara na woabɔ wo tirim reka yei anaa afoforɔ na ɛkaa me ho asɛm kyerɛɛ woɔ?”—Yohane 18:33, 34.
Pilato yɛɛ ne ho sɛnea ɔnnim Yesu ho hwee na afei mmom na ɔpɛ sɛ ɔhu no. Ɔbisaa no sɛ: “Meyɛ Yudani anaa?” Ɔsan kaa sɛ: “Wo ara wo manfoɔ ne asɔfoɔ mpanimfoɔ no na wɔde wo brɛɛ me. Ɛdeɛn na woyɛeɛ?”—Yohane 18:35.
Ahenni ho asɛm a Amrado Pilato bisae no, Yesu amfa anwadawada. Ɔmaa mmuaeɛ maa amrado no ho dwirii no.
Nnwetɛbona 30 a Yuda to guu asɔrefie hɔ no, na asɔfo mpanimfoɔ no nhu nea wɔmfa nyɛ. Wɔkeka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mmara mma kwan sɛ yɛde bɛgu sika akoraeɛ kronkron, ɛfiri sɛ ɛyɛ mogya sika.” Enti wɔde sika no kɔtɔɔ ɔnwemfo asase a wɔde bɛsie ahɔho. Wɔfrɛɛ asase no “Mogya Asase.”—Mateo 27:6-8.
Adɛn nti na Sanhedrin no san kɔhyiaa Fida anɔpatutuutu?
Ɛkwan bɛn na Yuda faa so wui? Dɛn na asɔfo mpanimfoɔ no de nnwetɛbona 30 no yɛe?
Esiane sɛ na Yudafo no pɛ sɛ Pilato kum Yesu nti, sobo bɛn na wɔde bɔɔ no?